Telenor Myanmar | FAQ
၁၅၀၀ ကျပ် သာဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ်အလှ မဟုတ်လျှင် ၁၅၀၀ ကျပ်ထက် ပိုပေးရန် မလိုပါ။
Telenor Phone အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုလျှင် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကုန်ကျပါသလဲ။
Telenor Phone အချင်းချင်း ခေါ်ဆိုလျှင် ၂၇ ကျပ် သာ ကျပါသည်။
Internet Package တစ်ခုကို ဘယ်လောက်ကုန်ကျနိုင်ပါသလဲ။
တယ်လီနော Package များကို လစဉ်သုံး၊ အပတ်စဉ်သုံး ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် ဖြန့်ချိပေးနေပါသည်။ Package များကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုလိုပါက:
နိုင်ငံခြားသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် Message ပို့ဆောင်မှု အသုံးပြုလို့ ရပါသလား။
အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ ခေါ်ဆိုနိုင်လို့ရတဲ့ နိုင်ငံများကို Website မှာ ပြထားပါတယ်။
အနည်းငယ်သော အသုံးပြုသူအရေအတွက်က ကွန်ရက် bandwidth ၏ ပမာဏများစွာကို သုံးစွဲမှုသည် အခြားသူများစွာ၏ သုံးစွဲရမှု အခြေအနေကို သက်ရောက်မှု ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ တရားမျှတစွာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒသည် တယ်လီနောအသုံးပြုသူတိုင်း အင်တာနက်ကို အကောင်းဆုံးချိတ်ဆက်ရယူသုံးစွဲနိုင်စေရေးကို အထောက်အကူပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။
Special Number များများမှ လွှဲ၍ ၁၅၀၀ ကျပ် ပဲပေးဆောင်ရပါမည်။
Telenor SIM Card များကို ပိုက်ဆံပေးလျှင် ချက်ချင်း ရနိုင်သလား။
Telenor SIM Card ကို အသုံးပြုရန် အချိန်ဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲ။
Form ဖြည့်ပြီး၍ မှတ်ပုံတင်ကဒ် ပေးပြီးလျှင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ငွေဖြည့်ကဒ်ကို ခဲခြစ်၍သော်လည်းကောင်း ၊ E-Load ကို အသုံးပြုသော် လည်းကောင်း ငွေဖြည့်နိုင်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Online မှတစ်ဆင့် ငွေဖြည့်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
Telenor SIM Card များကို Handset တိုင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
GSM Handset အားလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ငွေဖြည့်ကဒ် ဖြည့်ပြီးလျှင် ငွေကို မည့်သို့ စစ်ဆေးရမည်နည်း။
*124# ကို နှိပ်၍သော်လည်းကောင်း *124*1#ကို နှိပ်၍သော်လည်းကောင်း စစ်ဆေးနိုင်ပြီး ငွေရောက်ရှိပါက Telenor မှ Message ပို့ဆောင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ အပိုဆောင်း Bonus ငွေရလျှင်လည်း Telenor မှ Message ပို့ဆောင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
APN Setting ကို မည်သို့ ရှာဖွေရမည်နည်း။
ဖြစ်နိုင်လျှင် Customer အသစ်တိုင်းကို APN စနစ်ဖြင့် Internet Setting ကို Telenor မှ ပို့ဆောင်ပေးချင်ပါသည်။ Internet Setting ကို ပြောင်းမရ၍သော်လည်းကောင်း ၊ Internet Setting သည် ဖုန်းထဲသို့ မ၀င်လာလျှင်သော်လည်းကောင်း Customer Care Center 979 သို့ခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း ၊ အခြားဖုန်းဖြင့် +959790097900 သို့ခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ အင်တာနက် Setting ကို မိမိကိုယ်တိုင် ပြောင်းရန် Setting သို့သွားပြီး Mobile Network (သို့)Data ကိုသွားပါ။ အင်တာနက် Profile မှ APN နေရာတွင် အင်တာနက်ဟုပြောင်းရိုက်ပါ။ Username & Password ကို မပြောင်းပဲ ချန်ထားခဲ့နိုင်သည်။
တယ်လီနော ဆင်းမ်ကဒ်တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် အခကြေးငွေ ပေးဆောင်ရန်လိုပါသလား။
USSD ဆိုတာ ဘာလဲ။
USSD ဆိုသည်မှာ Telenor မှ သတင်းအချက်အလက်နှင့် Setting များကို ဖုန်းမှ လက်ခံပေးနိုင်သော Code များဖြစ်သည်။ ဥပမာ ၊ လက်ကျန်ငွေ စစ်ခြင်း၊ လိုချင်သော အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှုများကို မှာယူခြင်း၊ ငွေဖြည့်ကဒ်၀န်ဆောင်မှု နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်တွေ အစီအစဉျတွေကို လက်ခံပေးသော Code ဖြစ်သည်။ USSD Code ကို အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင် * ကို အရင်နှိပ်ပြီး code များနှိပ်၍ နောက်ဆုံးတွင် call ခလုတ်ကိုနှိပ်၍ အသုံးပြုရမည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက *979# သို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Telenor SIM Card အလုပ်မလုပ်ခြင်းအတွက် အကူအညီမည်သို့ ရယူနိုင်သနည်း။
Telenor SIM Card ဖြင့် 979 သို့ဆက်၍သော်လည်းကောင်း ၊ အခြားဖုန်းဖြင့် 09790097900 သို့ဆက်၍သော်လည်းကောင်းမေးမြန်းနိုင်ပြီး ဖုန်းတွင် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားလျှင် care@telenor.com.mm သို့ Email ပို့နိုင်ခြင်း (သို့) Telenor SIM Card ရောင်းချပေးသော အနီးနားရှိ ဖုန်းဆိုင်များသို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Telenor SIM Card ဖြင့် 979 သို့ ခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း ၊ အခြားဖုန်းဖြင့် 09790097900 သို့ခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း ဖုန်းလိုင်းကို ပိတ်နိုင်ပါသည်။ Telenor သို့ အကြောင်းမကြားခဲ့ဘူးဆိုလျှင် လက်ကျန်ငွေများကို အသုံးပြုခံရမည် ဖြစ်သောကြောင့် Telenor သို့ အကြောင်းကြားသင့်ပါသည်။ ဖုန်းလိုင်းပိတ်ပြီးလျှင် SIM Card ပြန်လည်လှျောက်ထားရန် နီးစပ်ရာ ဖုန်းဆိုင်များတွင် ပြန်လည်လှျောက်ထားနိုင်ပါသည်။
SIM ကဒ်ပျောက်ဆုံးခြင်း/ ပျက်စီးသွားခြင်း (သို့မဟုတ်) အခိုးခံရသောအခါ SIM ကဒ်ပြန်အစားထိုးနိုင်ပါသလား။
ယခင်ဖုန်းနံပါတ်အတိုင်း မြန်မာငွေကျပ် ၁၅၀၀ ဖြင့် ပြန်လည်အစားထိုး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းပျောက်ခြင်း (သို့) ပျက်ဆီးခြင်း (သို့) အခိုးခံရတဲ့ အခါတွင် ယခင် Number အတိုင်းပြန်လည် အသုံးပြုလို့ ရပါသလား။
ကိုယ့်မှာ အထောက်အထားရှိနေသရွေ ယခင် SIM Card အတိုင်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ SIM Card ပြန်လည်လျှောက်ထားရန်အတွက် အနီးစပ်ဆုံး Telenor ဆိုင်တွင် ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ လျှောက်ထားနိုင်သော ဆိုင်များကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။
My Contacts ကိုမည်သည့် ဖုန်းအမျိုးအစားများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသနည်း?
My Contacts သည် ဖုန်းအမျိုးအစားအများစုတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
My Contacts application ကိုAndriod Phones များအတွက် Google Play Store မှတဆင့် ရယူနိုင်ပါသည်။
Andriod OS version သည် 2.3.3 နှင့် အထက်ဖြစ်ရပါမည်။
SyncML ဖြင့် အလုပ်လုပ်သော Feature phones များအတွက် ကျွနု်ပ်တို့၏ web wizard www.mycontacts-app.comကိုအသုံးပြု၍ လိပ်စာများကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
My Contacts ကိုမည်သည့် ဖုန်းအမျိုးအစားများတွင် အသုံးပြု၍ မရနိုင်ပါသနည်း?
My Contacts ၏ ဝန်ဆောင်မှုများသည် အခမဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် mobile data အသုံးပြုမှု အတွက် ကုန်ကျငွေကိုပေးခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Wi-fi ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုပါကအခမဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
My Contacts ကိုအသုံးပြု၍ အင်တာနက် အသုံးပြုခမည်မျှကျသင့်ပါမည်နည်း။
သင်သည် သင်၏ ဖုန်းမှ အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုနေပါကသင်၏ဖုန်းကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေသောကုမ္ပဏီ၏ ကောက်ခံမှုအတိုင်းကျသင့်ပါမည်။ Wi-fiကိုအသုံးပြုပါကအခကြေးငွေ ကျသင့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဖုန်းအဟောင်းထဲမှ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာများကို My Contacts application ထဲသို့မည်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲနိုင်ပါသနည်း?
ပြောင်းရွှေ့မည့် ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ သင့်၏ လိပ်စာများကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါသည်။ သင်၏ ဖုန်းအဟောင်းသည် Andriod phone ဖြစ်ပါက Google play store ၊ iPhone ဖြစ်ပါက App Store တွင် My Contacts application ကိုရယူပြီး My Contacts application ထဲသို့ ဝင်ရောက်ကာ “Copy contacts” ကိုနှိပ်လိုက်ရုံဖြစ် လွယ်ကူစွာကူးပြောင်းနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်၏ ဖုန်းအဟောင်းသည် SyncMLဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံသောဖုန်းဖြစ်ပါက ကျွနု်ပ်တို့၏ web wizard ကိုအသုံးပြု၍ ပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါသည်။ သင်၏ ဖုန်းအဟောင်းသည် SyncML ဖြင့် အလုပ် လုပ်သည် မလုပ်သည်ကိုမသိလျှင် http://mycontacts-app.com/supported-phoneswebsite မှ “supported phones” ၏အောက်တွင် သင်၏ဖုန်းအမျိုးအစားကိုရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ သင်၏ဖုန်းသည် ဖော်ပြထားသောစာရင်းတွင် ပါဝင်ပါက My Contacts ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
My Contacts ဆိုသည်မှာဘာကိုဆိုလိုပါသနည်း?
My Contacts သည် သင်၏ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများကိုအင်တာနက်မှ တဆင့် သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတို့ ပြုလုပ်၍ရသော application တခုဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်၏ဖုန်းပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွား၍ သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းအသစ် ပြောင်းလဲကိုင်ဆောင်လိုသော်လည်းကောင်းသင်သိမ်းဆည်းထားသောလိပ်စာအချက်လက်များကိုသင်၏ ဖုန်းအသစ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
My Contacts မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သောအမျိုးအစားများမှာ
အင်တာနက် စာမျက်နှာမှ တဆင့် လိပ်စာများကိုပြောင်းလဲပြုပြင်ခြင်း
Feature phone မှတဆင့် သိမ်းဆည်းထားသောလိပ်စာများကိုအရံနေဖြင့် သိမ်းဆည်းရန် (သို့) ဖုန်းအသစ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် Contact Mover web wizard
Web ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသောလိပ်စာများကိုမည်သို့ ဖျက်ပစ်နိုင်မည်နည်း?
သင်၏ လိပ်စာများကိုwww.mycontacts-app.comတွင် ဝင်ရောက်၍ ဖျက်နိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် My Contacts app ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါက web ပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းထားသောလိပ်စာများသည် ၃၀ ရက် အကြာတွင် အလိုလျှောက် ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သင်၏ဖုန်းထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသောလိပ်စာများမှာမပျက်စီးပဲရန်ရှိနေပါမည်။
My Contacts ၏ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းမည်သို့ ရပ်ဆိုင်းရမည်နည်း?
My Contacs ၏ ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းရပ်ဆိုင်းလိုပါက ကျွနုပ်တို့၏ Customer Service ကိုတိုက်ရိုတ် စကားပြော၍ ဖြစ်စေအင်တာနက်စာမျက်နှာ ဤနေရာမှ တဆင့် ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါသည်။
သင် သိမ်းဆည်းထားသည့် လိပ်စာများကိုအခြားသူများတွေ့နိုင်ပါသလား?
မတွေ့နိုင်ပါ။ သင် သိမ်းဆည်းထားသောလိပ်စာများကိုသင်သာလျှင် မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
သင်၏လိပ်စာများကို web မှ တဆင့် မည်သို့ ရှာဖွေ၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နိုင်မည်နည်း ?
www.mycontacts-app.com သို့ ဝင်ရောက်၍ သင်၏ လိပ်စာများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ နိုင်ပါသည်။ Web ပေါ်တွင် ပြုပြင်ပြီးပါကသင်၏ဖုန်းထဲသို့ ထိုပြင်ဆင်ထားသောလိပ်စာများရရှိရန် My Contacts app ကိုဖွင့်၍ “Copy Contacts” ကို နှိပ်ရပါမည်။
My Contacts application ကိုမည်သို့ ထည့်သွင်းရမည်နည်း?
My Contacts application ကိုAndriodဖုန်း ဖြစ်လျှင် Google Play Store၊ iphone ဖြစ်လျှင် App Store မှ ပထမဦးစွာရယူရပါမည်။ ထိုသို့ ရယူရန် အတွက် Andriodဖုန်းဖြစ်လျှင် google account ရှိရမည်ဖြစ်ပြီးiphone ဖြစ်လျှင် Apple ID ရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Google account ကို ဤနေရာတွင် တွင် ဝင်ရောက် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Apple ID ကို ဤနေရာတွင်တွင် ဝင်ရောက် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်၏ဖုန်းပျောက်ဆုံးသွားပါက My Contacts application ကိုရယူ၍ သင်၏ ဖုန်းအသစ်တွင် ထည့်သွင်း၍ My Contacts application ထဲမှ “Copy Contacts” ကို နှိပ်၍ အရံသိမ်းဆည်းထားခဲ့သောသင်၏ လိပ်စာအချက်အလက်များကို ပြန်လည်ရယူ နိုင်ပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဘယ်လို စလုပ်ရမလဲ။
တယ်လီနော Tourist ဆင်းမ်ကတ်အား စတင်အသုံးပြုရန် မည်သည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမဆို ခေါ်ဆိုပါ။
Tourist SIM ဝယ်ဖို့ ဘယ်လို စာရွက် စာတမ်းတွေ လိုအပ်သလဲ။
ပက်စပို့စ်နှင့် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ လိုအပ်ပါတယ်။
Tourist SIM ကို တစ်ကတ်ထက် ပို ဝယ်လို့ ရသလား။
How can ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု အချိန်ကာလက ဘယ်လောက်လဲ။
စတင်အသုံးပြူချိန်မှ ၁၄ ရက်အထိ။
ရက် ၃၀ ရရှိပါမယ်။ ရက် ၃၀ အတွင်း ငွေထပ်ဖြည့်မယ်ဆိုရင် ပုံမှန်ဆင်မ်ကတ် သက်တမ်းအလိုက် ပြန်ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုတင် ငွေဖြည့်ဆင်မ် အမျိုးအစားလား၊ (prepaid) အသုံးပြုပြီး ငွေသွင်းရသည့် ဆင်မ်ကတ် အမျိုးအစားလား။ (postpaid)
ကြိုတင် ငွေဖြည့်ထားပြီး အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ (prepaid)
တခြား Promotion တွေကော ဝယ်ယူအသုံးပြုလို့ရပါသလား။
ကြိုသုံး (kyo thone) ဝန်ဆောင်မှုမှ လွဲပြီး မိမိကတ်ထဲတွင် ရှိသော ငွေပမာဏအလိုက် ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဆင်မ်ကတ်ဖိုး ထပ်လောင်း ပေးဆောင်ဝယ်ယူရမှာလား။
ဆင်မ်ကတ်အပါအဝင် ၁၂၀၀၀ ကျပ်သာ ကျသင့်ပါတယ်။
ဆင်မ်ကတ် ပျောက်ဆုံးခဲ့သော် အစားထိုး ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား။
ပျောက်ဆုံးဆင်မ်ကတ်ထဲရှိ ငွေပမာဏအတိုင်း ပြန်လည် ရရှိမှာလား။
ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်း ကုန်ဆုံးချိန်ကို ဘယ်လို သိနိုင်သလဲ။
မကုန်ဆုံးမီ ၁ ရက်အလို ကြိုတင် စာပို့ အကြောင်းကြားပါမည်။
အခြား အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရော ဝယ်လို့ရသလား။
ဆင်မ်တစ်ခုတည်းက Tourist Plan ထပ်ဝယ်လို့ ရသလား။
မရပါဘူး။ ဆင်မ်တစ်ကတ်ကို တခါသာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
မြန်မာပြည်ကို ထပ်မံ လည်ပတ်တဲ့အခါ ယခင် ဆင်မ် နံပါတ်ကိုသာ အသုံးပြုလိုရင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်သလဲ။
ရက် ၃၀ အတွင်း ငွေထပ်ဖြည့်ခြင်းဖြင့် ဆင်မ်ကတ်သက်တမ်း ၃၆၅ ရက်ကို ရရှိုနိင်ပါသည်။
Tourist ဆင်မ်ဖြင့် Roaming ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
Tourist ဆင်မ်မှ တခြား ဖုန်းနံပါတ်ကို ဘယ်လို ခေါ်ရမလဲ။
ပြည်ပသို့ ခေါ်ဆိုလိုပါက + or 00 Country code (နိုင်ငံကုတ်နံပါတ်) နှင့် ခေါ်ဆိုလိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်၊ ပြည်တွင်း ခေါ်ဆိုလိုပါက လိုင်းဖုန်း နံပါတ်ဆိုလျှင် - 01 နှင့် ခေါ်ဆိုလိုသည့် ဖုန်းနံပါတ် လက်ကိုင်ဖုန်း နံပါတ်ဆိုလျှာင် - 09xxxxxxxx
တခြားသူမှ Toursist ဆင်မ်ကို ဘယ်လို ဆက်သွယ်ခေါ်ယူနိုင်မလဲ။
ပြည်ပမှ ခေါ်ဆိုလိုလျှင် +9597xxxxxxxxxဝ
ပြည်တွင်း အချင်းချင်းမှ ခေါ်ဆိုလိုလျှင် 097xxxxxxxx.
My Tourist ဆင်မ်ကို ဘယ်လို ငွေဖြည့်ရမလဲ။
Telenor အရောင်းဆိုင်များမှ ခဲခြစ်ကတ်ဖြင့် ပုံမှန် ငွေဖြည့်နိုင်ပါသည်။
“စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သို့ရယူအသုံးပြုရမည်နည်း။
365သို့SUP ON ဟု SMS ပို့ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) *365*1#ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) 979 သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း “စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက တယ်လီနော၏စာမျက်နှာ www.telenor.com.mm သို့ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
“စူပါပွား”ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် မည်သည့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရရှိမည်နည်း။
၁၅.၅သန်းကျော်သော တယ်လီနော၏ဖုန်းဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများကို အလေးထား ဂုဏ်ပြုသည့် အနေဖြင့် တယ်လီနောဖုန်းအချင်းချင်း သက်သာသောနှုန်းထားဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုဆက်သွယ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ တယ်လီနောဖုန်းအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ကို တမိနစ်လျှင် ၁၇ ကျပ်နှုန်းဖြင့်သာ ကောက်ခံပါမည်။။ ထို့အပြင် တယ်လီနော၏ ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူများအနေဖြင့် အခြားသော အော်ပရေတာများ၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသော သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေများထံသို့ သက်သာသော နှုန်းထားဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အခြားအော်ပရေတာနံပါတ်များသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခကို တမိနစ်လျှင် ၂၅ ကျပ်နှုန်းဖြင့်သာ ကောက်ခံပါမည်။ ဤအစီအစဉ်ကို အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ၂ Mbpsကျော် မြန်နှုန်းရှိသော smart အစီအစဉ်ကိုသာ ထည့်သွင်းပေးထားပြီး၊ တစ်မက်ဂါဗိုက်လျှင် ၈ ကျပ်ကျသင့်ပါမည်။
“စူပါပွား”ဝန်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တွင် အခြားသော အခြေခံဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုခနှုန်းထားများ၊ အပိုထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုခ နှုန်းထားများကို မည်သို့သတ်မှတ်ထားသနည်း။
SMS ဝန်ဆောင်မှု၊ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၊ ပြည်ပ၌ တယ်လီနောဖုန်း ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုမှု စသည့် အခြားသော အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဖုန်းငွေလွှဲခြင်း၊ ကြိုသုံး၊ My Tune စသည့် အပိုထပ်ဆောင်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ကောက်ခံသည့် နှုန်းထားမှာ လက်ရှိကောက်ခံသည့် နှုန်းထားအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဝယ်ယူထားသောအင်တာနက်အစီအစဉ်များ၊ ရရှိထားသော အကျိုးခံစားခွင့်များ ကျန်ရှိနေ၊ မရှိနေကို မည်သို့ သိရှိစစ်ဆေးနိုင်မည်နည်း။
*124*1#သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ယခင်က လစဉ်ပေး My အင်တာနက်အစီအစဉ်များကို ဝယ်ယူထားပါက အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်များအား မူလအခြေခံအစီအစဉ်ဖြင့်သာ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါ အကျိုးခံစားခွင့်များကို စစ်ဆေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကောင်းမွန် မြန်ဆန်သော အင်တာနက်ကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Smart အင်တာနက်အစီအစဉ်များကို အသုံးပြုရန် အကြံပေးလိုပါသည်။
“စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းအတွက် ပြောင်းလဲအသုံးပြုခ မည်မျှကျသင့်မည်နည်း။ “စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုပြီးနောက် မူလအခြေခံအစီအစဉ်သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုပါက မည်မျှကြာကြာ စောင့်ရမည်နည်း။
“စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုပြီးနောက် မူလအခြေခံအစီအစဉ်သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုပါက မည်မျှကြာကြာ စောင့်ရမည်နည်း။“စူပါပွား”ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းအတွက် ပြောင်းလဲအသုံးပြုခ ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ မူလ အခြေခံအစီအစဉ်သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုပါက “စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ပြန်ပြောင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ 365သို့SUP OFF ဟု SMS ပို့ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်)*365*2#ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ (သို့မဟုတ်) 979 သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း မူလအခြေခံ အစီအစဉ်သို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မူလအခြေခံ အစီအစဉ်သို့ပြန်ပြောင်းအသုံးပြုပြီးနောက် “စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုကို ပြန်လည်အသုံးပြုလိုပါကလည်း မူလအခြေခံအစီအစဉ်သို့ပြောင်းလဲအသုံးပြုပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါမည်။ 365သို့SUP ON ဟု SMS ပို့ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်)*365*1#ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ (သို့မဟုတ်) 979 သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း “စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Postpaid ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူတယောက်အနေဖြင့် Prepaid ၏ “စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုလို့ရပါသလား။
ပြောင်းလဲအသုံးပြုလို့ရပါသည်။ Postpaid ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသူတယောက်အနေဖြင့် Prepaid ၏ “စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုသို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုလိုပါက တယ်လီနောအရောင်းဆိုင်များသို့ သွားရောက်၍သော်လည်းကောင်း၊ Call Center သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ပါသည်။
“စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုပြီးပါက ကြိုသုံးဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသလား။
“စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနေသူဖြစ်စေ၊ မူလအခြေခံအစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနေသူဖြစ်စေ ကြိုသုံးငွေအား ပြန်လည်ပေးဆောင်ပြီးပါက ကြိုသုံးဝန်ဆောင်မှုကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
“စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုပြီးပါက ယခင်ကရရှိထားသော ပရိုမိုရှင်းအတွက် ပေးသည့် အကျိုး ခံစားခွင့်များကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ငွေဖြည့်ထားခြင်းမရှိသော ဆင်းကတ်အသစ်ဖြင့် “စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသလား။
ရယူနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ပထမဆုံးဖုန်းခေါ်ဆိုမှု (First Voice Call) ပြီးထားပြီးသော ဆင်းကတ်ဖြစ်ရပါမည်။
ဖုန်းလက်ကျန်ငွေပမာဏ မရှိဘဲ “စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသလား။
“စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲရယူရန် စတင်အသုံးပြုခပေးဆောင်ရန်မလိုသောကြောင့်၊ ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ ပမာဏ မရှိဘဲ “စူပါပွား” ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါသည်။
မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော ဖုန်းနံပါတ်ကို ရွေးချယ်ရန် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကုန်ကျပါသလဲ။
ကုန်ကျစရိတ်ဟာ နံပါတ်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အထူးနံပါတ် SIM ကဒ်များကိုတော့ Telenor အရောင်းဆိုင်များတွင်သာ နံပါတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကုန်ကျပါသည်။
Phone မှာ Internet ချိတ်ရန် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကုန်ကျပါသလဲ။
Telenor SIM ကဒ်များစာ Mobile Internet ချိတ်ပြီးသားဖြစ်သောကြောင့် အပိုထပ်ဆောင်းပေးရန် မလိုပါ။
Telenor မှ တခြားဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုလျှင် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကုန်ကျပါသလဲ။
Telenor မှ တခြားဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုလျှင်၂၇ ကျပ် သာ ကျပါသည်။
Telenor မှ ဘယ်လိုငွေဖြည့်ကဒ်များကို ရောင်းပါသလဲ။
1000, 3000, 5000 and 10 000 ကျပ်တန်ငွေဖြည့်ကဒ်များကိုရောင်းချမည်။
မိမိဖုန်းကဒ်၏ လက်ကျန်ငွေစာရင်းက ဘယ်အချိန်ထိအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
ငွေဖြည့်ပြီး တစ်နှစ်ကြာသည်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းဘေလ် ဖြည့်ပြီး ငွေမဝင်လျှင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ။
ထိုသို့ဖြစ်လျှင် Telenor Phone ဖြင့် Call Centre Number - ၉၇၉ (သို့) တခြားဖုန်းဖြင့် 09790097900 ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်မရလျှင် နီးစပ်ရာ တယ်လီနော် အရောင်းဆိုင်များတွင် စုံစမ်း ၍သော်လည်းကောင်း care@telenor.com သို့ E-Mail ပို့နိုင်ပါသည်။
Internet Packages များကို လစဉ်သုံး အပတ်စဉ်သုံး စုံလင်စွာ ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ Internet Package အသုံးပြု၍ ကုန်သွားလျှင် ဘယ်လိုအကျိုးဆက်ဖြစ်မလဲ။
ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ Internet Package သုံးလို့ ကုန်သွားလျှင် သုံးသလောက်ပေး အစီအစဉ်အတိုင်းဖြတ်တောက်သွားပါမည်။
Telenor မှ Post-Paid plans ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိပါသလား။
ခေါ်ဆိုမယ့် နိုင်ငံပေါ်မူတည်ပြီး ကုန်ကျမည်။ နိုင်ငံအလိုက် ကုန်ကျစရိတ်ကို Website တွင်ပြထားသည်။
နိုင်ငံခြားရောက်စဉ် Telenor SIM ကဒ်ကို အသုံးပြုလို့ရပါသလား။
Telenor SIM ကဒ်မှာ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ တချို့နိုင်ငံများကိုတော့ ဝန်ဆောင်မှုစတင်ချိန်မှာ ဆက်သွယ်လို့မရနိုင်သေးပါ။ခရီးမသွားခင် Telenor Call Centre 979 ကို ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ဤနေရာတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုက ဘယ်လို အသုံးပြုရပါသလဲ။
SIM ကဒ်ဝယ်တာနဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Telenor နှင့် စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ နိုင်ငံခြား ခရီးသွားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ခရီးသွားခေါ်ဆိုမှုနှုန်းတွေဟာ မတူညီတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခရီးမသွားခင် စျေးနှုန်းတွေကို စုံစမ်းမေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက Telenor Phone ဖြင့် Call Centre Number - ၉၇၉ (သို့) တခြားဖုန်းဖြင့် 09790097900 ခေါ်ဆိုပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ဤနေရာတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားခရီးသွားနေစဉ် ဖုန်းဝင်ခေါ်ဆိုမှု အတွက် ပိုက်ဆံပေးရမှာလား။
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားရောက်နေတုန်းမှာ အိမ်ကိုဖုန်းခေါ်ရင် ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ကုန်မှာလဲ။ Telenor Phone ဖြင့်ခေါ်တာနဲ့ တခြားဖုန်းဖြင့် ခေါ်တာက ကွာခြားမှု ရှိလား။
ကိုယ်သွားရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံရဲ့ ခေါ်ဆိုမှုနှုန်းပေါ် မူတည်ပြီး စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသွားမည်။ စျေးနှုန်း အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
apps Install လုပ်နေတုန်း ဖုန်းသုံးလျှင် တစ်ချို့ apps တွေဖြစ်တဲ့ မိုးလေဝသတင်းတွေ၊ Facebook သတင်းတွေ၊ email download လုပ်တာတွေက Internet ကိုသုံးမှ Update လုပ်လို့ရတာ ဖြစ်တယ်။ Internet အသုံးပြုခ ကလည်း ကိုယ်ယူထားတဲ့ နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီး ဖြတ်သွားတာပါ။ ကိုယ်ဖုန်းမှာ apps တွေကို အလိုအလျောက် Update မလုပ်စေချင်ရင် Setting မှာ ဝင်ပြီး ညှိလို့ရသလို၊ Internet ပိတ်ထားလို့ရတယ်။ Internet အသုံးပြုမှု ပိတ်ချင်လျှင် 500 သို့ အခမဲ့ Message ပို့ဆောင်လို့ ရပါတယ်။ Internet ပြန်လည်အသုံးပြုချင်လျှင်လည်း 500 သို့ Message ပို့ပြီး ဖွင့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ထို့နောက် ဖုန်းကို restart ချပြီးမှ ပြန်လည်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်မှာ အထောက်အထားရှိနေသရွေ ယခင် SIM Card အတိုင်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ SIM Card ပြန်လည် လျှောက်ထားရန်အတွက် အနီးစပ်ဆုံး Telenor ဆိုင်တွင် ပြန်လည် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ လျှောက်ထားနိုင်သော ဆိုင်များကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။
3G ဖုန်းနဲ့ 3G Mobile Network ရှိနေပေမယ့် ဘာလို့ 2G ဖုန်းလိုင်းမှာ ရှိနေတာလဲ။
3G Network ရှိတဲ့နေရာမှာ 2G Network ရတာဟာ အကြောင်းပြချက်များရှိပါတယ်။
4G ဆိုသည်မှာ မိုဘိုင်းကွန်ယက်နည်းပညာ၏ စံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ မိုဘိုင်းနည်းပညာ၏ စတုတ္ထမြောက်မျိုးဆက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ 2G နဲ့ 3G ၏ နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်ပြီး၊ 4G ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အမြန်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးအင်တာနက်အသုံးပြုရသည့် အတွေ့အကြုံကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ စူပါမြန်နှုန်းမြင့် 4G ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် အင်တာနက်မှ file များကို လျှင်မြန်စွာ ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ခြင်း၊ video chatပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ multiplayer game များ ကစားနိုင်ခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် HD ဗီဒီယိုများကို onlineမှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းစသည့် 4G ဝန်ဆောင်မှု၏ အားသာချက်များကို ခံစားသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
LTE (Long Term evolution) ဆိုသည်မှာ အလွန်မြန်ဆန်သောနှုန်းဖြင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသော ရေဒီယိုအခြေခံနည်းပညာ တခုကို ဆိုလိုပါသည်။
GPRS၊ EDGE၊ 3G နဲ့4G တို့ရဲ့ ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။
GPRS ဆိုသည်မှာ ပုံမှန် ဒေတာမြန်နှုန်းရရှိနိုင်သည့် 2G နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသော ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုကို ဆိုလိုပါသည်။
EDGE ဆိုသည်မှာ GPRS မြန်နှုန်းထက် ပိုမိုမြန်ဆန်သော ဒေတာမြန်နှုန်းရရှိနိုင်သည့် 2.5G နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသော ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုကို ဆိုလိုပါသည်။
3G ဆိုသည်မှာ GPRS နှင့် EDGE တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပိုမိုမြန်ဆန်ကောင်းမွန်သည့် ဒေတာမြန်နှုန်းရရှိနိုင်သည့် 3G နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသော ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုကို ဆိုလိုပါသည်။
4G ဆိုသည်မှာ မိုဘိုင်းဒေတာလွှဲပြောင်းမှုနည်းပညာ၏ ကမ္ဘာ့ခေတ်အမှီဆုံးနည်းပညာဖြစ်သည့် LTE နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသော ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုကို ဆိုလိုပါသည်။ GPRS၊ EDGE၊ 3G တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အမြန်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး ဒေတာမြန်နှုန်းကို ရရှိနိုင်သည့် ကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှုကို ဆိုလိုပါသည်။
Telenor ၏ 4G ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုလို့ရသလဲ။
Telenor ၏ 4G ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည့် video call ခေါ်ဆိုခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် HD ဗီဒီယိုများကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ online ဂိမ်းဆော့ခြင်းစသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Telenor ၏ 4G ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် မည်သည့်မြန်နှုန်းကို ရရှိနိုင်ပါသလဲ။
Telenor ၏ 4G သည် 3G မြန်နှုန်းထက် ပိုမိုမြန်ဆန်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုနေသော အသုံးပြုသူဦးရေပေါ်မူတည်၍ အင်တာနက်မြန်နှုန်း အနည်းငယ်ကွာခြားပါလိမ့်မည်။
တယ်လီနော 4G နက်ဝေါ့ကို အသုံးပြုရန် SIM ကဒ်အသစ် (သို့) နံပါတ် အသစ်လိုအပ်ပါသလား။
နံပါတ်အသစ် လဲလှယ်ရန်မလိုအပ်ပါ ၊ သို့သော် သင်၏လက်ရှိ SIM ကဒ်သည် USIM မဟုတ်ပါက နီးစပ်ရာ တယ်လီနောဆိုင်များတွင်သင်၏ SIM ကဒ်ကို USIM ဖြင့်သွားရောက်လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။
USIM ကဒ် ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
USIM ကဒ် သည်မြန်နှုန်းမြင့် SIM ကဒ်ဖြစ်ပြီး SIM application များ၏ ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ကူညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသည် လုံခြံုမှုပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး အဆင့်မြှင့်ထားသည့် Phonebook လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်ပါသည်။
ပုံမှန် SIM ကဒ် နှင့် USIM ကဒ် သည်မည်သို့ ကွာခြားသနည်း။
ပုံမှန် SIM ကဒ် သည် 2G နှင့် 3G နက်ဝေါ့ ကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၊ USIM ကဒ်သည် 2G ၊ 3G နှင့် 4G နက်ဝေါ့ အားလုံးကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒေတာ သိုမှီးမှု ပမာဏ တွင် ပုံမှန်ဆင်းကဒ် သည် ၆၄ kb သိုမှီးနိုင်ပြီး ၊ ကဒ်သည် ၁၂၈ kb သိုမှီးနိုင်ပါသည်။
တယ်လီနော 4G နက်ဝေါ့ သည် ဒေတာ အသုံးပြုမှု ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး သုံးစွဲမှုပိုမိုကုန်ကျနိုင်ပါသလား။
သဘောအားဖြင့်ပြောရလျှင် 4G နက်ဝေါ့သည် 3G နက်ဝေါ့နှင့် တူသော်လည်း ဒေတာစီးဆင်းမှုပိုမိုမြန်ဆန်သောကြောင့် သင်၏အသုံးပြုမှုပမာဏအပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ (ဥပမာ။ ။ သင်ဒေတာပမာဏ များများသုံးလျှင် များများကုန်ကျမည်ဖြစ်ပါသည်။)
တယ်လီနော 4Gနက်ဝေါ့ကို မည်သို့စတင် အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
Telenor 4G နက်ဝေါ့ကို စတင်အသုံးပြုရန် သင်၏ ဆင်းကဒ် နှင့် ဖုန်းသည် Telenor 4G နက်ဝေါ့ (2100 MHz) ကြိမ်နှုန်း ကို အသုံးပြုရန်ကိုက်ညီမှုရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။
*၄၄၄# ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်၎င်း ၊ ၅၀၀ သို့စာတို "Check4g" ဟုပေးပို့ခြင်းဖြင့်၎င်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
တယ်လီနော 4G နက်ဝေါ့ကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။ အသုံးပြုရန် ဘာလိုအပ်မည်နည်း။
တယ်လီနော 4G နက်ဝေါ့ကို အသုံးပြုရန် သင်၏ဖုန်းသည် 4G နက်ဝေါ့ အသုံးပြုနိုင်သောဖုန်းဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ဖုန်းကွန်ယက်တွင် 4G အသုံးပြုနိုင်သောကွန်ယက်ကိုရွေးချယ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
တယ်လီနော 4G နက်ဝေါ့ဖြင့် Online Games ကစားနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ ၊ တယ်လီနော 4G နက်ဝေါ့ဖြင့် Online Games များကစားနိုင်ပါသည်။
တယ်လီနော 4G နက်ဝေါ့ဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ၊ ဖုန်းလက်ခံရရှိမှု နှင့် စာတိုဝန်ဆောင်မှု ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ ၊ တယ်လီနော 4G နက်ဝေါ့ဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ၊ ဖုန်းလက်ခံရရှိမှု နှင့် စာတိုဝန်ဆောင်မှု ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
တယ်လီနော 4G ဖြင့် video call ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့ ၊ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Telenor 4G အသုံးပြု ရ၊ မရ ဘယ်လို စစ်ရမလဲ။
Telenor 4G နက်ဝေါ့ကို စတင်အသုံးပြုရန် သင်၏ ဆင်းကဒ် နှင့် ဖုန်းသည် Telenor 4G နက်ဝေါ့ (2100 MHz) ကြိမ်နှုန်း ကို အသုံးပြုရန်ကိုက်ညီမှုရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင် ယခုအသုံးပြုနေသော ဆင်းကတ် 4G ရ၊ မရကို *444# ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ 500 သို့ Check4G ဟု SMS ပေးပို့ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ယခုအသုံးပြုနေသော ဆင်းကတ် Telenor 4G ရ၊ မရ ဘယ်လို စစ်ရမလဲ။
Telenor 4G ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုရန် USIM အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင် ယခုအသုံးပြုနေသော ဆင်းကတ် 4G ရ၊ မရကို *444# ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ 500 သို့ Check4G ဟု SMS ပေးပို့ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သင် ယခုအသုံးပြုနေသော ဆင်းကတ်သည် ပုံမှန်ဆင်းကတ်ဖြစ်ပါက နီးစပ်ရာတယ်လီနောဆိုင်များတွင် USIM ကို လဲလှယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Telenor 4G ဝန်ဆောင်မှုကို မည်သည့်နေရာတွင် အသုံးပြုလို့ ရပါသလဲ။
တယ်လီနော၏ 4G ၀န်ဆောင်မှုများကို မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းရှိ မြို့ကြီး ၁၅ မြို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဘာဖြစ်လို့ ရန်ကုန်နှင့်အခြားမြို့များတွင် Telenor 4G ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုလို့မရသေးတာလဲ။
တယ်လီနောဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများအား အကောင်းဆုံးကွန်ယက်ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ နောက်မကြာသောအချိန်အတောအတွင်း အခြားမြို့များတွင်ပါ တဖြည်းဖြည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Telenor 4G ဝန်ဆောင်မှုကို 3G ကွန်ယက်သာ အသုံးပြုနိုင်သော ဟန်းဆက်များတွင် အသုံးပြုလို့ရပါသလား။
မရပါ။ Telenor 4G ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် 4G ကွန်ယက်အသုံးပြုနိုင်သော ဟန်းဆက်များကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Mobile ဖုန်းဖြင့် Internet အသုံးပြုခြင်း
Telenor SIM Card တွေမှာ အင်တာနက်ကို အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ သို့ပေမယ့် လက်ကျန်ငွေကို စစ်ဆေးပြီးမှ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။Telenor SIM Card ဖြင့် 979 သို့ ခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း၊ ၁ (သို့) ၃ ကိုနှိပ်၍သော်လည်းကောင်း အင်တာနက် Setting ကိုရှာနိုင်ပါသည်။မိမိ Handset တွင် Internet Setting မရှိပါက Setting မှ APN နေရာတွင် Internet ဟုပြောင်းထည့်ပါ။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက Telenor SIM Card ဖြင့် Call Center 979 သို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
Telenor SIM Card တွင်ပါသော အင်တာနက်နှုန်း ဘယ်လောက်ထိမြန်နိုင်သလဲ။
Telenor SIM Card တွင်ပါသော အင်တာနက်နှုန်းသည်2mbpsကျော် ထိသုံးနိုင်ပါသည်။ Handset အမျိုးအစား ၊ တာ၀ါတိုင်နှင့် အနီးအဝေး၊ အသုံးပြုသူ အရေအတွက် များပေါ်မူတည်၍ အင်တာနက်အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်သည်။
1 MB ကို ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။
အကယ်၍ မြန်ဆန်သော အင်တာနက်နှုန်းကို သုံးချင်လျှင် 1 MB ကို ၈ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး မိမိလိုအပ်သည့် အချက်ပေါ်မူတည်၍ MB ကို ယူဆောင်သင့်ပါသည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
1 MB အတွက် ဘယ်လောက် အသုံးပြုနိုင်မလဲ။
Facebook က ပုံတစ်ပုံ ကို Download ဆွဲလျှင် 200-300 kb ကျသင့်မည်။ email ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ 20-30 kb ကျသင့်မည် ဖြစ်သည်။ Youtube Video ကြည့်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် 3-4 MB ကျသင့်မည် ဖြစ်သည်။
Telenor Mobile Internet အစီအစဉ်ကို SMART Internet ဟုခေါ်ပါသည်။ SMART Internet သည် အသုံးပြုခြင်းပေါ်မူတည်၍ ကျသင့်မည် ဖြစ်သည်။ Telenor အင်တာနက်ကို အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင် ၀န်ဆောင်ခ 1 MB ကို ၈ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
3G Network ရမှာလား။
3G network အသုံးပြုလို့ရပါသည်။ Telenor အနေနဲ့ စျေးကွက်ရဲ့အခြေအနေနှင့်၀န်ဆောင်မှုတွေကို စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် 2G / 3G Network2မျိုးလုံး ပေးဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
4G Network ရောရမှာလား။
4G Network ပေးဆောင်ရန် အဆင်သင့်ပေးဆောင်ရန် ဖြစ်နေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း 4G Network အသုံးပြုနိုင်မည့် LTE များလုံလောက်နေပါပြီ။
2G နှင့် 3G ကွာခြားချက်က ဘာလဲ။
2G နှင့် 3G သည် Mobile Internet Service များကို ထောက်ပံ့ပေးသော စနစ်များ ဖြစ်သည်။ ကွာခြားချက်များမှာ 2G Network ထက် 3G Network သည် Internet Download Speed ပိုကောင်းမည်ဖြစ်ပြီး 2G Network မှာ Voice Call, SMS, Internet Browsing, Facebook & Email များရမည် ဖြစ်ပါသည်။ 3G Networkမှာ Internet Download Speed ပိုကောင်းမွန်ခြင်း၊ Video File Size ကြီးများကို ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Internet Package ဖြင့်အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင် *124*1# ကိုနှိပ်၍ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ Internet Package ဖြင့် အသုံးမပြုပါက မိမိအသုံးပြုသလောက် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး ငွေစစ်မည်ဆိုလျှင် *124*# ကိုနှိပ်၍ စစ်ဆေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ အသုံးပြုနေသည့် ငွေပမာဏကို သိရှိစေရန် Telenor မှ Message များ ပို့ဆောင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
Customer Care Center နှင့် စကားပြောချင်လျှင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
Telenor SIM Card ဖြင့် 979 သို့ ခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း ၊ အခြားဖုန်းဖြင့် 09790097900 သို့ခေါ်ဆို၍သော်လည်းကောင်း ခေါ်နိုင်ပါသည်။ ဖုန်းတွင် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားလျှင်လဲ care@telenor.com.mm သို့ Email ပို့နိုင်ပြီး နီးစပ်ရာ ဖုန်းဆိုင်များတွင် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။အကယ်၍ Telenor Customer မဟုတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် နိူင်ငံခြားကဖုန်းဆိုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် +95(0)9790097900 သို့ ခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Telenor SIMကဒ် အချင်းချင်း sms ပို့ရင် ဘယ်လောက်ကုန်မှာလဲ။
Telenor SIMကဒ် အချင်းချင်း sms ပို့ရင် ၁၅.၇၅ ကျပ် ကုန်ကျပါတယ်။
Telenor က တခြား SIMကဒ် တွေကို sms ပို့ရင် ဘယ်လောက်ကုန်မှာလဲ။
Telenor က တခြား SIMကဒ် တွေကို sms ပို့ရင် ၁၅.၇၅ ကျပ် ကုန်ကျပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသို့ sms ပို့နိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားသို့ sms ပို့နိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသို့ sms ပို့လျှင်ဘယ်လောက် ကုန်ကျပါသလဲ။
မည်သည့်နိုင်ငံသို့ မဆို ငွေကျပ်၃၂ ဖြင့် sms ပို့နိုင်သည်။
နိုင်ငံခြားမှsms များကို လက်ခံရရှိနိုင်ပါသလား။
နိုင်ငံခြားမှ sms များကို Telenor SIM ကဒ်ဖြင့် လက်ခံနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေလျှင် နိုင်ငံခြားမှ sms များကို လက်ခံရန် အပိုကြေးပေးရန်မလိုပါ။
Telenor Customer များကိုဘယ်လိုမျိုး ၀န်ဆောင်မှုမျိုးတွေပေးမှာလဲ။
ဖုန်းပြောခြင်း၊ SMS ပို့ခြင်း၊ Internet အသုံးပြုခြင်းတွေ အပြင်အခြား၀န်ဆောင်မှုများကိုပါ ပေးဆောင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ဥပမာ - Miss Call သတိပေးချက် ၊ My Tune ၊ Call Forwarding ၊ Balance Transfer စသည့်၀န်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Miss Call သတိပေးချက်များရှိသလား။
Miss Call သတိပေးချက် ၀န်ဆောင်မှုက ဖုန်းမအားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပိတ်ထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လိုင်းမအားလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Miss Call အဖြစ် မှတ်သားထားပေးမည် ဖြစ်သည်။
mca service အတွက် ၀န်ဆောင်ခ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။
mca service အတွက် ၀န်ဆောင်ခမှာ အခမဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
Wallpaper လိုမျိုး Content Download တွေပါလား။
Telenor SIM Card တွေမှာ Wallpaper တွေ ၊ Game တွေကို Mobile Portal မှ တဆင့် Download လုပ်နိုင်အောင် စီ စဉ်ပေးထားပါသည်။
My Tune ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဖုန်းလိုင်းမ၀င်ခင် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို တစ်ဖက်လူမှ နားထောင်နိုင်သော တေးဂီတ ၀န်ဆောင်မှု တစ်ခုဖြစ်သည်။
My Tune Service ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်မလဲ။
333 သို့ MT ON စာရိုက်၍ Message ပို့ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
My Tune service အတွက်၀န်ဆောင်ခ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။
၃၁၅ ကျပ်ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပြီး အပတ်တိုင်းပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ Telenor တေးသွားကို Default Tune အနေဖြင့်အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ငွေ ၃၁၅ ကျပ်ဖြင့် တစ်နှစ်အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Telenor က ဘယ်လို Message ၀န်ဆောင်မှုမျိုးတွေပေးမှာလဲ။
အာဆီယံ သတင်း SMS
တရားဓမ်မနှင့် ပတ်သက်သည့် SMS
ပညာရေး (အဂငျ်လိပ်) SMS
ဖျော်ဖြေရေး သတင်း SMS
အစိုးရ သတင်း SMS
ကျန်းမာရေး သတင်း SMS
အားကစား သတင်း SMS
နိုင်ငံခြား ခရီးသွား SMS
မိုးလေ၀သ သတင်း SMS များဖြစ်ပြီး
အသေးစိတ်ကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
SMS-based Services ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရမလဲ။
Message ပို့သောအခါ အသုံးပြုသော Keyword နှင့် Short Number များရရန် ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မိမိဖုန်းဘေလ်ကို အခြားသူကို ပို့ပေးလို့ရမလား။
Telenor Customer အချင်းချင်း ဖုန်းဘေပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ပို့ဆောင်နိုင်မည့် ပမာဏ အကန့်အသတ်ရှိပါသည်။ ပို့ဆောင်မည့်သူမှာ လွှဲငွေ၏ ၅% နှင့် ၀န်ဆောင်ခ ၅% ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး ၅၀၀ ကျပ်မှ စ၍ ပို့ဆောင်နိုင်မည်။ ငွေလက်ခံရရှိသူမှာ ထို၀န်ဆောင်မှုအတွက် အခကြေးငွေဆောင်ရန်မလိုပါ။
နိုင်ငံခြားမှ Apps များကို Download လုပ်ပါသလား။
Internet ဖွင့်၍ Google Play Store (သို့) အခြား Apps Store များမှတစ်ဆင့် Download လုပ်နိုင်ပါသည်။ Apps Website မှ တိုက်ရိုက် Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် မိမိအသုံးပြုသော အင်တာနက် အစီအစဉ်အလိုက် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
တခြားနိုင်ငံမှနယ်တွင်းဖုန်းများကို ဘယ်လို ဖုန်းခေါ်ဆိုရမလဲ။
[သို့][+] [နိုင်ငံ ကုတ်နံပါတ်] [၀ မပါသော ပြည်နယ် ကုတ်နံပါတ်] [ပြည်နယ် နံပါတ်] ကိုခေါ်ပါ။
တခြားနိုင်ငံမှ မိုဘိုင်းဖုန်း သို့ ဘယ်လို ဖုန်းခေါ်ဆိုရမလဲ။
 OR [+] [နိုင်ငံ ကုတ်နံပါတ်] [၀ မပါသောမိုဘိုင်း နံပါတ်] ကိုခေါ်ပါ ။
နိုင်ငံခြားမှ Telenor မြန်မာဖုန်းလိုင်း ကို ဘယ်လိုခေါ်ဆိုရမလဲ။
“00” OR [+]  [979 XXXXXXX] ကို ခေါ်ဆိုပါ။
နိုင်ငံခြားမှ ဝင်လာသော sms ကို လက်ခံရန် ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ။
တခြားနိုင်ငံမှ ဖုန်းများကို ဘယ်လို sms ပို့မလဲ။
ရောက်ရှိနေသောနိုင်ငံ၏ ဖုန်းနံပါတ်၏အရှေ့တွင် “00” (သို့) [+] [နိုင်ငံ ကုတ်နံပါတ်] ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
Message တစ်စောင်မှာ စာလုံးရေ ဘယ်လောက်ပါသလဲ။
ပုံမှန်အားဖြင့် Message တစ်စောင်မှာ စာလုံးရေ ၁၆ဝပါသည်။ တခြား handsets တွေမှာပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသို့ရောက်စဉ် Telenor SIM ကဒ်ဖြင့် Internet သုံးနိုင်ပါသလား။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံအများစုတွင် Telenor SIMကဒ်ဖြင့် Internet သုံးနိုင်ပါသည်။ Mobile Internet အတွက် တိကျတဲ့စျေးနှုန်းတွေရှိပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသို့ရောက်စဉ် အဝင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အတွက်ပိုက်ဆံပေးရမှာလား။
အဝင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ရော အထွက်ခေါ်ဆိုမှု အတွက် ပိုက်ဆံပေးရပါမည်။ အသေးစိတ် စျေးနှုန်းများကို ဤနေရာတွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်လာလျှင် မိမိဖုန်းကို Telenor Network ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Telenor မြန်မာဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို ထားသော နိုင်ငံတကာဖုန်း operator ကိုအသုံးပြုသူ ဖြစ်ပါက ခရီးမထွက်ခင် ထို operatorကို အရင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Telenor Myanmar တွင် ဘယ်လိုအလုပ် လျှောက်နိုင်သလဲ။
လျှောက် ထားနိုင်သောနေရာ နှင့် ပုံစံကို ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း နှင့် cover letter ကို hr.myanmar@telenor.com သို့ပို့ပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အလုပ်လျှောက်ပြီးပေမယ့် ဘာလို့ ပြန်အကြောင်းမကြားတာလဲ။
လျှောက်ထားသူတွေရဲ့ လျှောက်လွှာရောက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုစာပို့ပေးပါမယ်။ ယင်းအတည်ပြုစာတွင် လျှောက်ထားသူများပြားလွန်းတဲ့အတွက် ရွေးချယ်ခံရသော လျှောက်လွှာရှင်များကိုသာ နောက်တစ်ဆင့်အတွက် အကြောင်းပြန်ပြီး သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ခံရတဲ့လျှောက်လွှာရှင်များထံသို့ လူတွေ့စစ်ဆေးမှု တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားစာ ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ရွေးချယ်မခံရလျှင် သင့လျှောက်လွှာဟာ တယ်လီနောရဲ့ database မှာ သိမ်းဆည်းထားမှာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း သင့်တော်တဲ့ နေရာအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Telenor Myanmar က တာဝါတိုင်ဆောက်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်ရင် ဘယ်လိုလျှောက်နိုင်ပါသလဲ။
တစ်ဆင့်ခံစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသူ, Apollo and IGT မှာ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အကျိုးတူပူးပေါင်းသူများ နှင့် ဖြန့်ချီသူများ
Telenor Myanmar ရဲ့ဖြန့်ချီသူ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ။
လက်လီ/လက်ကား ဖြန့်ချီသူများသည် Application Form ကို Download ဆွဲပြီး Formပုံစံ ကိုဖြည့်ပြီး partner.myanmar@telenor.com.mm သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ဖြည့်သွင်းထားသော အချက်အလက်များသည် Telenor မှ လိုအပ်သော အချက်အလက်များ နှင့် ကိုက်ညီမှသာ အကြောင်းပြန်ကြားမည်။
Prepaid နှင့် Postpaid အဓိက ကွာဟချက်ကဘာလဲ။
- ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Telenor Number ၅လုံးအထိ ၁မိနစ် ၁၂ကျပ် နှုန်းဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း။
- လစဉ် အခမဲ့ မြန်နှုန်းမြှင့် Internet 2GB အထိရရှိ နိုင်ခြင်း။
- လစဉ် အခမဲ့ My Tune ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်ခြင်း။
- My Telenor App မှတဆင့် လစဉ်အသုံးပြုမှု အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
ဘယ်အချိန်မှာ Bill ကို ဘယ်လိုစစ်ရမလဲ။
- Day 4: Telenor Myanmar Self Care App မှတဆင့် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
- Day 4: Telenor Myanmar မှပို့ပေးသော SMS မှတဆင့် သိရှိနိုင်ခြင်း။
- Day 4: Telenor Myanmar မှမိမိ၏ Email သို သို့ပို့ပေးသော E-bill မှတဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
- Day 4: Telenor Web Portal မှတဆင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
လစဉ်အကျိုးခံစားခွင့်၊ လစဉ်အပိုသုံးငွေ နှင့် Internet Package များကို ဘယ်လိုစစ်မလဲ။
- Telenor Myanmar Self Care App
- *124# လစဉ်အပိုသုံးငွေ (သို့) လစဉ် Plan ဖိုးအပြင် ထပ်ဆောင်းအသုံးပြုလို့ရသောငွေ။
- *124*1# လစဉ် Plan ဖိုး ၊ အခမဲ့ Data Pack ၊ ထပ်ဆောင်းဝယ်ယူထားသော Package များ။
- Telenor Web Portal
စိတ်ကြိုက် Telenor နံပါတ် ၅လုံးအား ဘယ်လိုထည့်သွင်းမလဲ ၊ ဘယ်လိုထုတ်မလဲ။
- Add FNF (SMS “addfnf 9597XXXXXXXX” to 500)
- Remove FNF (SMS “remfnf 9597XXXXXXXX” to 500)
- View FNF (SMS “viewfnf” to 500)
Postpaid အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် အသုံးပြုနေစဉ် Commercial Tax အားပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ဘဲ လကုန် Bill ထွက်လာမှသာလျှင် အဆိုပါ Bill အပေါ်တွင် ၅% အခွန်ပေးဆောင်ရမည်။
- Telenor အရောင်းဆိုင်များတွင်ဖြစ်စေ
- E-Load မှတဆင့် ဖြစ်စေ၊
- CB ဘဏ် မှတဆင့်ဖြစ်စေပေးဆောင်နိုင်သည်။
Bill မဆောင်ရသေးမှီ အချိန်တွင် ငွေဖြည့်ပါက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။
ပေးဆောင်စရာ Outstanding Bill ရှိနေသည့်အချိန်တွင် ငွေဖြည့်မိပါက ဖြည့်လိုက်သောငွေပမာဏသည် Outstanding Bill ကိုသွားချေမည်ဖြစ်သည်။
အသုံးမပြုရသေးသော Plan ဖိုးနှင့် အခမဲ့ရသော Data ပမာဏတို့ကို နောက်လသို့ သယ်ဆောင်အသုံးပြုခွင့်ရမလား။
- အသုံးမပြုလိုက်ရဘဲ ကျန်ရှိနေသော Plan ဖိုးကိုနောက်လသို့ သယ်ယူအသုံးပြုခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ပြီး လစဉ်ယူထားသော Plan အတိုင်း Bill ပေးဆောင်ရမည်။ (လစဉ်လတိုင်း အကန့်အသတ်မရှိ)
- လစဉ်အခမဲ့ရရှိသော 1GB နှင့် 2GB Pack များအနေဖြင့် လကုန်သည်နှင့် တပြိုင်နက် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားမည် ဖြစ်ပြီး လစဉ်လတိုင်း ၁ရက်နေ့တွင် ယူထားသော Plan အလိုက်အသစ် ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Bill နောက်ဆုံးပေးဆောင် ရမည့်ရက်တွင် မပေးဆောင်ပါက နောက်ကျကြေးရှိပါသလား။
Bill နောက်ဆုံးပေးဆောင် ရမည့်ရက်မှာ လစဉ် ၁၅ရက်နေ့ဖြစ်ပြီး ၁၆ရက်နေ့မှစတင်ကာ လစဉ်လတိုင်း နောက်ကျကြေး ၂၅၀၀ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။ အကယ်၍ ၂၀ရက်နေ့အထိမှ Bill လာမဆောင်ပါက ၂၁ ရက်နေ့မှစ၍ Outgoing Call ၊ SMS ပေးပို့ခြင်းနှင့် Internet အသုံးပြုခွင့်များ ရပ်ဆိုင်းသွားမည် ဖြစ်သည်။ (အဆိုပါနောက်ကျကြေး ၂၅၀၀ ကျပ်ပေါ်တွင် Commercial Tax မကောက်ပါ။)
၂၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှ Bill လာဆောင်ပါက မည့်သည့်အချိန်တွင် Unbar ပြန်ဖြစ်မလဲ။
Bill ဆောင်ပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။